Mukhtaar Roobow oo Bilaabay Dhaq Dhaqaaq Ciidan -
Wadaadka layiraahdo Mukhaar Roobow Cali oo Sanadkii hore isku soo dhiibay Dowlada Soomaaliya ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan kawada deegaano katirsan Gobolada Baay iyo Bakool oo uu kasoo jeedo Wadaadkan.
Sida aan Wararka ku heleyno Mukhtaar ayaa diyaarinaya ciidan xoogan oo dagaal lagalaya Al Shabaab ee maamula deegaano katirsan gobolada Baay iyo Bakool.
Ciidamada uu diyaarinayo Roobow ayaa isugu jira dagaalyahano Asaga ka Amar qaata oo uu kala soo goostay Al Shabaab iyo ciidamo kale oo katirsan Maamulka Koonfur Galbeed.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay ka war hayaan dhaq dhaqaaqyada ciidan uu gobolada Baay iyo Bakool ka wado Muqtaar Roobow , waxaana maamulka sheegeen in ciidankaasi loo diyaarinayo dagaal ka dhan ah Al Shabaab.
Wasiir ku xigeenka Amniga Maamulka Koonfur Galbeed C/risaaq Cabdi Aadan oo lahadlay Tusmo Times ayaa sheegay in ay la socdaan dhaq dhaqaaqyada ciidan uu wado Mukhtaar Roobow, waxaa uu tilmaamay Wasiir ku xigeenka in Muqtaar waajib ka saaran yahay in uu la dagaalamo kooxda Al Shabaab.
Mukhtaar Roobow Cali oo Miisaan Culus ku dhexlahaa Al Shabaab ayaa Markii uu isku soo dhiibay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Shabaab waxay dhoor jeer werareen Ciidamada uu wato wadaadkaas oo Xarun u, ah Deegaanka Abal ee Gobolka Bakool iyadoo Dagaalkaas uu ku dhintay wiil uu dhalay Mukhtaar Roobow Cali.
Al Shabaab Mukhtaar waxay u, arkaan jiritaankooda Mid Caqabad ku ah.
Related Items:Featured, Mukhtaar Roobow oo Bilaabay Dhaq Dhaqaaq Ciidan
Madaxda Maamulada Soomaaliya shir ku yeelandoono Garowe